Apple na-enweta ndetu site na Microsoft? | Martech Zone
Ọ dị ka kwa izu m na - ebudata melite ọrụ ọzọ maka Vista. N'oge na-adịbeghị anya, Vista nwere Ọrụ ngwugwu n'otu ụbọchị Apple nwere mmelite 10.5.3 maka OS X Leopard. Ebe ọ bụ na melite na agụ owuru, M na a na-enwe tọn mbipụta iji ihe nchọgharị… ma ọ bụ Safari ma ọ bụ Firefox.
Taa, ekpebiri m ịtinye Safari ka m hụ ma m ga-edozi ihe a ozugbo. Mgbe m malitere nwụnye, ahụrụ m nke a:
Ya mere, ha mere nweta nkwalite ma leghaara iji melite ntinye Safari ha iji nye ya ohere? Oh ezigbo Apple, ikekwe ị kwesịrị ịnọ obere. Ihe isi ike bụ na m na-eji Firefox na Ndekota na MacBookPro a ka ọ na-awụfụ ụgbụ ahụ ngwa ngwa.
Tags: Kaadi ekeresimesiecommerceezumike infographicmobile nsụgharịibe edokọbarambadamba ọnụego mgbanwewordpress ha
Enweela m otu nsogbu ahụ. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nweta ndozi maka ya!
Ọ baghị uru ikwu, ana m eji pc m ọtụtụ n'oge na-adịbeghị anya. M n'ezie na-eji Mac maka ihe ọ dị mma maka agbanyeghị… nzube.
Achọtara m otu ngwa nke yiri ka esemokwu na nke ahụ Ihe mkpuchi Orbicule. Edere m nkwado ha wee wepụ ngwa ahụ kpamkpam ọ dị ka m na-eme nke ọma. Ọ dị oke njọ, ahụrụ m nchekwa nke ngwa ha na-enye. Agwara m ha ka ha dee m mgbe ha doziri nke a.
M ka na-eche na ha nwere ike ịbụ ụfọdụ okwu ndị ọzọ, mana nke a bụ isi.